ချစ်ဇာတ်လမ်းအယောင်ဆောင်လက္ခဏာ ၈ မျိုး – Gentleman Magazine
ချစ်ဇာတ်လမ်းအယောင်ဆောင်လက္ခဏာ ၈ မျိုး
၁. အဆက်အသွယ် မကောင်းခြင်း
အဆက်အသွယ်ဆိုတာ ချစ်သူတွေအတွက် အရေးကြီးဆုံးပါ။ သင်တို့နှစ်ယောက် သိပ်ပြီး အထိအတွေ့မရှိခဲ့ရင် သင့်ချစ်သူနဲ့ ရင်ထဲကစကားတွေ မပြောဖြစ်ရင် တစ်ပါတ်နေလို့ ဖုန်းတစ်ခေါက်မခေါ်ဖြစ်ရင် သင်ဟာ သင့်ရည်းစား ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာ သိချင်စိတ်မရှိလို့ပါ။ သင်တို့ချစ်ဇာတ်လမ်းမရှိသလိုတောင် ခံစားနေရနိုင်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ကို သံယောဇဉ်တွယ်ဖို့ဆိုတာ သူနဲ့ ရုပ်ပိုင်း စိတ်ပိုင်း များများ ထိတွေ့ဆက်ဆံပေးမှ ဖြစ်နိုင်မှာပါ။
၂. ပွတ်သီးပွတ်သပ် နေလွန်းခြင်း
ပွတ်သီးပွတ်သပ် ခဏခဏ နေတာက ကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဖူးဆိုတာ သင့်အတွက် နည်းနည်းထူးခြားနေပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ သင်တို့ဟာ လူကွယ်ရာမှာ ဘာသိဘာသာနေပြီး လူရှေ့ရောက်မှ အရမ်းချစ်ပြနေတာဆိုရင်တော့ စဉ်းစားဖို့လိုပါပြီ။ သင်တို့ဟာ တကယ်မချစ်ပဲနဲ့ ကိုယ်ဘာသာကိုယ် ချစ်တယ်လို့ လိမ်နေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၃. အမှတ်တရအချိန်လေးတွေ မရှိခဲ့ဖူးခြင်း
ချစ်ဇာတ်လမ်းဟာ ပုံမှန်ပဲဖြစ်နေပြီး ထူးခြားတာ မပါပါဘူး။ အမှတ်တရအချိန်ဆိုတာ သင်တို့အတွက် မရှိခဲ့ပါဘူး။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အတူရှိချိန် ဘာမှ ထူးထူးခြားခြား မခံစားရပါဘူး။ အဲဒါဆိုရင်တော့ တစ်ခုခုလွဲနေပါပြီ။ အချစ်ဆိုတာ အကောင်းဆုံးခံစားချက်တစ်ခုပါ။ သင်မှာ ထူးထူးထွေထွေ မခံစားရဘူးဆိုရင်တော့ တကယ်ချစ်နေတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
၄. ဝေခွဲမရစရာ များလွန်းခြင်း
ချစ်ဇာတ်လမ်း စစခြင်းမှာ နည်းနည်းဝေခွဲမရတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ သူငါ့ကိုချစ်ရဲ့လား။ မချစ်ဘူးလား။ ခုချိန် ဘယ်လိုခံစားနေရမလဲ။ ငါ့ခံစားချက်ကို သိရဲ့လား။ အဲလိုခံစားရတာ ပုံမှန်ပါ။ ဒါပေမယ့် အချိန်ကြာလာတာတောင် သင့်ချစ်သူက သင့်ကို တကယ်ချစ်မချစ် မဝေခွဲနိုင်ဘူး၊ ခံစားချက်တွေ ကိုက်ညီမနေဘူးဆိုရင်တော့ သင်တို့ချစ်ဇာတ်လမ်းဟာ အတုအယောင်ကြီး ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
အတွဲဆိုတာ စနေ နောက်နေတာတွေရှိကြသလို စကားအတည်လဲ ပြောတတ်ကြပါတယ်။ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အတွဲတွေမှာ ငြင်းခုန်စရာမရှိဘူးလို့ ထင်ရင် အမှားကြီး မှားသွားပါလိမ့်မယ်။ သူတို့တွေက ဘယ်လိုပြသနာကိုပဲဆွေးနွေးဆွေးနွေး ငြင်းခုန်ငြင်းခုန်၊ သူတို့ရဲ့ အချစ်ကို မထိခိုက်စေပါဘူး။ သင်တို့အတွဲက စကားအလေးအနက်တွေမပြောပဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးတွေပဲ နေ့တိုင်းပြောနေမယ်ဆိုတာ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ သူ့ကို တကယ်အလေးထားရင် စကားမများ ရန်မဖြစ်ပဲ မနေပါဘူး။
ချစ်ဇာတ်လမ်းကောင်းတွေမှာဆို သင့်ရဲ့ မာနသိက္ခာတွေကို သင်ချစ်တဲ့သူအတွက် စွန့်ခဲ့ရမှာပါ။ သင်ကချည်းပဲ အနိုင်လိုချင်နေမယ်ဆိုရင် တကယ်မချစ်တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အချစ်များလေ စိတ်ပျော့ပြောင်းလာလေ ချစ်သူကို အနိုင်ပေးချင်လာလေလေပါပဲ။
၇. လိင်ကိစ္စတစ်ခုထဲပဲ ဂရုစိုက်ခြင်း
အိပ်ရာထဲမှာတော့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် စွဲလမ်းလွန်းနေမှာပါ။ အပြင်ရောက်တော့ စိတ်မဝင်စားတော့ပါဘူး။ ကိုယ်ခန္ဓာနှီးနှောရင်ပဲ အပျော်ကို ခံစားရပါတယ်။ ဒါတွေက လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက် ဇာတ်လမ်းပါ။ ချစ်ဇာတ်လမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ လိင်ကိစ္စမရှိတော့ရင် သင်တို့ဇာတ်လမ်းလဲ ပြီးသွားမှာပါ။ ဒါမျိုးတွေက အတွေ့ရအများဆုံး ချစ်ဇာတ်လမ်းအယောင်ဆောင်တွေပါ။
၈. တစ်ယောက်အသိုင်းအဝိုင်း တစ်ယောက်မသိကြခြင်း
သင့်ကို အတည်ကြံတဲ့သူဟာ သူ့ဘဝထဲ သင့်ကိုခေါ်သွားဖို့ ကြိုးစားမှာပါ။ သင်နဲ့ သူ့ရဲ့ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမှာပါ။ ဇာတ်လမ်းစလို့ တော်တော်ကြာတဲ့အထိ သူ့အသိုင်းအဝိုင်းထဲ သင့်ကိုခေါ်သွားဖို့ မကြိုးစားဘူးဆိုရင် သူက သင့်ကို အတည်ကြံတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အယောက်ဆောင်ချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုပါပဲ။
ခဈြဇာတျလမျးအယောငျဆောငျလက်ခဏာ ၈ မြိုး
၁. အဆကျအသှယျ မကောငျးခွငျး
အဆကျအသှယျဆိုတာ ခဈြသူတှအေတှကျ အရေးကွီးဆုံးပါ။ သငျတို့နှဈယောကျ သိပျပွီး အထိအတှမေ့ရှိခဲ့ရငျ သငျ့ခဈြသူနဲ့ ရငျထဲကစကားတှေ မပွောဖွဈရငျ တဈပါတျနလေို့ ဖုနျးတဈခေါကျမချေါဖွဈရငျ သငျဟာ သငျ့ရညျးစား ဘာဖွဈနလေဲဆိုတာ သိခငျြစိတျမရှိလို့ပါ။ သငျတို့ခဈြဇာတျလမျးမရှိသလိုတောငျ ခံစားနရေနိုငျပါတယျ။ လူတဈယောကျကို သံယောဇဉျတှယျဖို့ဆိုတာ သူနဲ့ ရုပျပိုငျး စိတျပိုငျး မြားမြား ထိတှဆေ့ကျဆံပေးမှ ဖွဈနိုငျမှာပါ။
၂. ပှတျသီးပှတျသပျ နလှေနျးခွငျး
ပှတျသီးပှတျသပျ ခဏခဏ နတောက ကောငျးတဲ့အရာမဟုတျဖူးဆိုတာ သငျ့အတှကျ နညျးနညျးထူးခွားနပေါလိမျ့မယျ။ တကယျလို့ သငျတို့ဟာ လူကှယျရာမှာ ဘာသိဘာသာနပွေီး လူရှရေ့ောကျမှ အရမျးခဈြပွနတောဆိုရငျတော့ စဉျးစားဖို့လိုပါပွီ။ သငျတို့ဟာ တကယျမခဈြပဲနဲ့ ကိုယျဘာသာကိုယျ ခဈြတယျလို့ လိမျနတော ဖွဈနိုငျပါတယျ။
၃. အမှတျတရအခြိနျလေးတှေ မရှိခဲ့ဖူးခွငျး
ခဈြဇာတျလမျးဟာ ပုံမှနျပဲဖွဈနပွေီး ထူးခွားတာ မပါပါဘူး။ အမှတျတရအခြိနျဆိုတာ သငျတို့အတှကျ မရှိခဲ့ပါဘူး။ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ အတူရှိခြိနျ ဘာမှ ထူးထူးခွားခွား မခံစားရပါဘူး။ အဲဒါဆိုရငျတော့ တဈခုခုလှဲနပေါပွီ။ အခဈြဆိုတာ အကောငျးဆုံးခံစားခကျြတဈခုပါ။ သငျမှာ ထူးထူးထှထှေေ မခံစားရဘူးဆိုရငျတော့ တကယျခဈြနတော မဖွဈနိုငျပါဘူး။
၄. ဝခှေဲမရစရာ မြားလှနျးခွငျး
ခဈြဇာတျလမျး စစခွငျးမှာ နညျးနညျးဝခှေဲမရတှေ ဖွဈလာတတျပါတယျ။ သူငါ့ကိုခဈြရဲ့လား။ မခဈြဘူးလား။ ခုခြိနျ ဘယျလိုခံစားနရေမလဲ။ ငါ့ခံစားခကျြကို သိရဲ့လား။ အဲလိုခံစားရတာ ပုံမှနျပါ။ ဒါပမေယျ့ အခြိနျကွာလာတာတောငျ သငျ့ခဈြသူက သငျ့ကို တကယျခဈြမခဈြ မဝခှေဲနိုငျဘူး၊ ခံစားခကျြတှေ ကိုကျညီမနဘေူးဆိုရငျတော့ သငျတို့ခဈြဇာတျလမျးဟာ အတုအယောငျကွီး ဖွဈနနေိုငျပါတယျ။
အတှဲဆိုတာ စနေ နောကျနတောတှရှေိကွသလို စကားအတညျလဲ ပွောတတျကွပါတယျ။ ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ အတှဲတှမှော ငွငျးခုနျစရာမရှိဘူးလို့ ထငျရငျ အမှားကွီး မှားသှားပါလိမျ့မယျ။ သူတို့တှကေ ဘယျလိုပွသနာကိုပဲဆှေးနှေးဆှေးနှေး ငွငျးခုနျငွငျးခုနျ၊ သူတို့ရဲ့ အခဈြကို မထိခိုကျစပေါဘူး။ သငျတို့အတှဲက စကားအလေးအနကျတှမေပွောပဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးတှပေဲ နတေို့ငျးပွောနမေယျဆိုတာ မဖွဈသငျ့ပါဘူး။ သူ့ကို တကယျအလေးထားရငျ စကားမမြား ရနျမဖွဈပဲ မနပေါဘူး။
ခဈြဇာတျလမျးကောငျးတှမှောဆို သငျ့ရဲ့ မာနသိက်ခာတှကေို သငျခဈြတဲ့သူအတှကျ စှနျ့ခဲ့ရမှာပါ။ သငျကခညျြးပဲ အနိုငျလိုခငျြနမေယျဆိုရငျ တကယျမခဈြတာ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ အခဈြမြားလေ စိတျပြော့ပွောငျးလာလေ ခဈြသူကို အနိုငျပေးခငျြလာလလေပေါပဲ။
၇. လိငျကိစ်စတဈခုထဲပဲ ဂရုစိုကျခွငျး
အိပျရာထဲမှာတော့ တဈယောကျကိုတဈယောကျ စှဲလမျးလှနျးနမှောပါ။ အပွငျရောကျတော့ စိတျမဝငျစားတော့ပါဘူး။ ကိုယျခန်ဓာနှီးနှောရငျပဲ အပြျောကို ခံစားရပါတယျ။ ဒါတှကေ လိငျဆကျဆံမှုအတှကျ ဇာတျလမျးပါ။ ခဈြဇာတျလမျးမဟုတျပါဘူး။ လိငျကိစ်စမရှိတော့ရငျ သငျတို့ဇာတျလမျးလဲ ပွီးသှားမှာပါ။ ဒါမြိုးတှကေ အတှရေ့အမြားဆုံး ခဈြဇာတျလမျးအယောငျဆောငျတှပေါ။
၈. တဈယောကျအသိုငျးအဝိုငျး တဈယောကျမသိကွခွငျး
သငျ့ကို အတညျကွံတဲ့သူဟာ သူ့ဘဝထဲ သငျ့ကိုချေါသှားဖို့ ကွိုးစားမှာပါ။ သငျနဲ့ သူ့ရဲ့ မိသားစု၊ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ မိတျဆကျပေးမှာပါ။ ဇာတျလမျးစလို့ တျောတျောကွာတဲ့အထိ သူ့အသိုငျးအဝိုငျးထဲ သငျ့ကိုချေါသှားဖို့ မကွိုးစားဘူးဆိုရငျ သူက သငျ့ကို အတညျကွံတာ မဟုတျပါဘူး။ အယောကျဆောငျခဈြဇာတျလမျးတဈခုပါပဲ။
Next: ချစ်တယ်ဆိုတာထက် အဓိပ္ပါယ်ပြည့်စုံစေသည့် စကား(၁၀)ခွန်း